Hotera yeTrump International muWashington, DC inotengeswa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Hotera yeTrump International muWashington, DC inotengeswa
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Hotera yeTrump International muWashington, DC inotengeswa.
Zvisinei nekunyepa kwaVaTrump kuti yakaunza mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora panguva yavakatonga, magwaro ehurumende anoratidza kuti nzvimbo iyi yakarasikirwa nevaimbove mutungamiri wenyika mari inodarika mamiriyoni makumi manomwe emadhora.
Trump International Hotel iri muchivako chekare chenhoroondo mudhorobha reWashington.
Chivakwa chenhoroondo ndechehurumende yeUS asi chinogona kurenda kwemakore anosvika zana.
Kambani yekudyara yeMiami-yakavakirwa CGI Merchant Group inoronga kubvisa zita raTrump kubva pachivakwa ichi uye kurigadzira nemhando yeHilton's Waldorf Astoria.
Miami-based investment femu CGI Merchant Group yakatenga kodzero dze Trump International Hotel iri muchivakwa chekare chekare mudhorobha reWashington, DC
Trump International Hotel inowanikwa zvidhinha zvishoma kubva kuWhite House uye inogara chivakwa chenhoroondo chiri chehurumende yeUS asi chinogona kurenda kwemakore anosvika zana.
Hotera yave nemukurumbira nayo Trump vatsigiri vakati kuunza kurasikirwa kwakawanda pane purofiti mumakore achangopfuura.
Pasinei TrumpKunyepa kwekuti hotera iyi yakaunza mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora panguva yaaive muhofisi, magwaro ehurumende anoratidza kuti nzvimbo iyi yakarasikirwa neaimbova mutungamiri wenyika inodarika madhora makumi manomwe emamiriyoni emadhora.
Komiti inoona nezveCongress yakaonawo kuti hotera iyi yakawana mari inosvika madhora mazana matatu nemazana manomwe emadhora kubva kuhurumende dzekunze, izvo zvinogona kutariswa sekukonana kwezvido.
Zvakadaro, kodzero dzehotera iyi dzichaunza madhora mazana matatu nemakumi manomwe nemashanu emamiriyoni emadhora kukambani yeVaimbove Mutungamiriri weAmerica, VaDonald Trump.
Mutengi iMiami-based investment femu CGI Merchant Group, iyo inoronga kubvisa zita raTrump kubva panzvimbo uye kuita kuti itariswe nekupihwa chiratidzo neboka reHilton's Waldorf Astoria.